ဘူဂေးရီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(534 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေကစားသမား hosting အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များ
ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းထွက် Check နဲ့ high-quality နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းဂိမ်းကိုဆက်ကပ်။ ဒီနေရာတွင် NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်းနှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောထင်ပေါ်ကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှလောင်းကစားရုံဂိမ်းအသက်ရှင်ရန် slot ကစက်တွေကနေဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုဒ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားသဲကမ်းခြေနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူမသာခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်။ ခရီးသွားဧည့်နှင့်ဒေသခံများ၏အလွန်ဝမ်းမြောက်စေရန်, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံဆိုဖီယာ၏မြို့တော်အဖြစ်ရေပန်းစားအပန်းဖြေဒေသများ၌နေသောလောင်းကစားဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကက်တလောက်မှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ။ တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်လောင်းကစားဝိုင်းစည်းမျဉ်းအခွင့်အာဏာဘူလ်ဂေးရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းပြည်နယ်လောင်းကစားကော်မရှင်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်း legalizes ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဇန်နဝါရီလ 1, 2017 အပေါ်အင်အားသုံးသို့ ဝင်. ရသောဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်သစ်ကိုဥပဒေဖြစ်ပါသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာတိုင်းပြည်များ၏နယ်မြေအပေါ်လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုင်စင်ရရှိရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ 2017 ၏အဖြစ်, ဘူလ်ဂေးရီးယားအများအပြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များရှိပါတယ် - အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံကနေအွန်လိုင်း Bookmakers ရန်။ အကျော်ကြားဆုံးအမှတ်တံဆိပ် Pokerstars, bet365, bwin နဲ့ betfair ဖြစ်ကြသည်။
ထိပ်တန်း 10 ဘူဂေးရီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ဘူလ်ဂေးရီးယားတစ်ကြက်သရေပင်လယ်နက်ထဲမှာအားလပ်ရက်, နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းနှင့် chic ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတော်လေးဒီမိုကရေစီစျေးနှုန်းများများ၏ပေါင်းစပ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဤတိုင်းပြည်ခရီးသွားဧည့်များ၏တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုတစ်ခုအရာဝတ္ထုပါစေ။ CasinoToplists ၏တာဝန်အမှုအရာယခုအချိန်တွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူရှိသောဘယ်လောက်ထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
လောင်းကစားများနှင့် 1979 ထံမှ 2017 မှဥပဒေများကို;
နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာပိတ်ဆို့မထားဘူးဆိုရင်, သင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာ (ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်);
4 နှစ်ရှိပြီ + နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကနေဟိုတယ် 5-18 ကြယ်တစ်စိုးမိုးရေးအဖြစ်မြေပြင်အခြေစိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ;
သင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ play ချင်ပါသလား? ကျနော်တို့ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်မည်သို့ပြောပြလိမ့်မယ် - step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်;
ဘူလ်ဂေးရီးယား: ပထဝီနှင့်သမိုင်း, ဆိုဖီယာအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများ, တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်၎င်း၏မြို့သားတို့။
လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ဥပဒေများ - သမိုင်းကိုကိုးကား
1979 ဆိုဖီယာဟိုတယ်အတွင်းပထမဆုံးလောင်းကစားရုံ "Vitosha" ၏ဖွင့်ပွဲ
1999 "ဟုအဆိုပါ Khazart ၏တရား" တိုင်းပြည်အတွက်ဥပဒေစညျးမဉျြးဥပလောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းကစားများအတွက်ပြည်နယ်ကော်မရှင်ကလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး။ အခြေခံအားဖြင့်ဒေသခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ဦးလောင်းကစားရုံဖွင့်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန် * အနည်းဆုံး4မှာဟိုတယ်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။
2000 အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာလောင်းကစားများအတွက်ပြည်နယ်ကော်မရှင် (SCG) ကနေလိုင်စင်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
တချို့ကနိုင်ငံခြားလောင်းကစားရုံ (တကယ်တော့အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆန့်ကျင်သော) ကိုဥရောပသမဂ္ဂအတွက်လိုင်စင်ရှိသည်အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်ပင်သူတို့အနေဖြင့်ပိတ်ဆို့ကြသည်။
ပြည်နယ်၏စည်းမျဉ်းများအရ, အော်ပရေတာ "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ" တိုင်းပြည်များ၏နယ်မြေအပေါ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့သီးခြားဒိုမိန်းရှိသည်နှင့်တိုင်းပြည်မျက်နှာသာအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ပိုင်နက်အတွင်း site ကိုပိတ်ဆို့မထားလျှင် - ထို့နောက်ကဂိမ်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်မြေ "အော့ဖ်လိုင်း" ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
မြေပြင်အခြေစိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံယေဘုယျအား 4-5 ကြယ်များနှင့်အတူဟိုတယ်နှင့်အထူးအပန်းဖြေစခန်းဧရိယာများတွင်တည်ရှိနေ
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လောင်းကစားရုံမှဝင်ရောက်ခွင့်များ, တာဝန်အခြေအနေများ: 18 နှစ်ပေါင်းထံမှအသက်, ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာစာရွက်စာတမ်းများရရှိမှု။ သင်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမူးယစ်၌ရှိကြ၏လျှင်, play နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ယူနီဖောင်းလာခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကြောင်းအရပ်ဖက်ကျွန်သည်သို့မဟုတ်သင် (လောင်းကစားရုံပိုင်ရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများကိုပင်ဆွေမျိုးများကစားရန်ခွင့်ပြုမရနိုငျသညျ) လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားခြင်းကိုစတင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျနော်တို့အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားဘယ်လိုစတင်သလဲအပေါ်တစ်ဦးခြေလှမ်း-by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စည်းကမ်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောနိုင်ငံခြားလောင်းကစားရုံအနည်းဆုံးဒါသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နိမ့်ဆုံးအသိပညာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်ကိုသုံးပါ။
ဒီလောင်းကစားရုံဘူလ်ဂေးရီးယား၏ပိုင်နက်အတွင်းဥပဒေရေးရာရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ IP address ကိုသဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ပိုင်နက်ထဲမှာပိတ်ဆို့မထားလျှင်, ထို့နောက်သူကကစားဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။ တခါတရံမှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံကထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်လောင်းကစားရုံ၌အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ သာ. ကောင်း၏, ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုတိုင်းလျောက်ပတ်သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင်၏ရှေ့မှောက်တွင် (အချက်အလက်များကိုအများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်လောင်းကစားရုံရဲ့ website တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်);
အနည်းဆုံးအား3နှစ်ပေါင်းများအတွက်လောင်းကစားရုံ၏အတွေ့အကြုံကို;
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများဆော့ဖ်ဝဲအွန်လိုင်းဂိမ်း (စသည်တို့ကို NetEnt, Playtech, Microgaming,) ၏အဓိက developer များကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုတစ်ခုနည်းလမ်း Pick - ထိုလောင်းကစားရုံအများအပြားငွေပေးချေမှုရွေးစရာများ (Visa, PayPal, WebMoney, Skrill, Yandex သို့မဟုတ်အခြားသူများ) ၏ရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သင်မှန်ရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, (တစ်ခါတစ်ရံကြီးမားသောဆုကြေးငွေအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်အချိန်တစ်အချို့သောကာလအတွက်ဖြစ်ကြောင်း) ရန်ပုံငွေများကိုဝင်ရောက်နှင့်ဆုတ်ခွာဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်။ ငွေကြေး၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုဆုတ်ခွာဖို့အော်ပရေတာကော်မရှင်ဖွဲ့ရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်အလုပ်၏အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ:
အပိုဆုဝေါဟာရများ (အာမခံ) နှင့်ဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များ
အကောင့်ဖွင့်ပွဲ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (အချို့လောင်းကစားရုံဝိသေသလက္ခဏာများ၏အထောက်အထားမလိုအပ် - ညာဘက်။
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install သို့မဟုတ်သင် browser မှာကစားနိုင်ပါတယ်ဖို့လိုအပ်ရှိမရှိ
အဆိုပါလောင်းကစားရုံလုံခြုံရေးအာမခံချက်အဘယျသို့သောပေးသလဲ စသည်တို့ကို SSL ကိုဒေတာ encryption ကို, တာဝန်ရှိဂိမ်းအစီအစဉ်
သင်တို့ရှိသမျှသည်အထက်ပါအချက်များနှင့်အတူကြှမျးဝငျရပွီးနောကျ, သင်ကစားပွဲကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ CasinoTopLists လည်းဂိမ်းစနစ်များနှင့်မဟာဗျူဟာ၏စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအကွံပေး။ ဒါကြောင့်သင်ကလျင်မြန်စွာဂိမ်းအတွက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, သင်၏ bankroll ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်ထိုကဲ့သို့သောဂရိနိုင်ငံ, တူရကီ, ဆားဘီးယား, ရိုမေးနီးယားနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအဖြစ်နိုင်ငံများနှင့်ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေနှင့်နယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ပတ်သက်. ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် 354 နှစျတှငျဖျောပွထားသညျ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကာလကတည်းကဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအများအပြားဖြစ်ရပ်များခံထားပါတယ်: ကနှောင်းပိုင်း 14th ရာစုအတွင်းအော်တိုမန်အင်ပါယာ၏သိမျးပိုကျ, ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဆားဘီးယားနှင့်အတူစစ်အတွက်ပါဝင်မှုနှင့်များ၏ဘက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပါဝင်မှုခဲ့သည် ဂျာမနီ ။ ခေတ်သစ်ဘူလ်ဂေးရီးယား 1989 ဖွဲ့စည်းကာပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ အခုတော့တိုင်းပြည်ဆိုဖီယာမြို့၌မြို့တော်နှင့်အတူ 28 ဒေသများသို့ခွဲခြားထားတယ်။
အလက်ဇန်းဒါး Nevsky ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ။ နေရပ်လိပ်စာ: Aleksandar Nevski 1 1000 ။ ဒါဟာ 1912 built-in နှင့်၎င်း၏တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်အတူအခြားသောအသင်းတော်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအကြားထွက်ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည် - 5,000 လူတွေ။
အမျိုးသားသမိုင်းပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: Vitoshko Lale လမ်း 16, 1618 ။ ဤတွင်သမိုင်းအပိုငျးအငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလအထိအများဆုံးရှေးခေတ်ကထံမှကောက်ယူနေကြသည်။
အမျိုးသားရုပ်ပုံပြခန်း ။ နေရပ်လိပ်စာ: пл။ "မင်းသား Alexandre ငါ" №1။ အနုပညာချစ်သူများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနာမည်ကျော်သခင်အားဖြင့် 50,000 ပန်းချီကားတစ်ဦးပြပွဲလာရောက်လည်ပတ်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဤနေရာတွင်ခေတ်မီအနုပညာနှင့်မာစတာအတန်း၏ပြပွဲဖြစ်ကြသည်။
စီးတီးတိရစ္ဆာန်ရုံ ။ နေရပ်လိပ်စာ: ဗဟိုဝင်ပေါက် Simeonovsko Shosse Boulevard မှာတည်ရှိပါတယ်။ Srebarna လမ်းပေါ် 1 ကနေ "အနောက်တိုင်းဝင်ပေါက်။ 250 ဟက်တာ၏ပိုင်နက်တွင်သင်သည်အလွန်ထူးခြားဆန်းပြားနှင့်မတိရစ္ဆာန်များနှင့်ငှက်တွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
စိန့် Sophia ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ။ နေရပ်လိပ်စာ: ပဲရစ်လမ်း2။ ဒါက 6th ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပါသည်, ဘူလ်ဂေးရီးယား၏မြို့တော်မှအမည်အပ်ပေးတော်မူ၏။
ဘူလ်ဂေးရီးယား 865 အတွက်ခရစ်ယာန်ဘာသာမွေးစားထားတဲ့ပထမဦးဆုံး Slavic တိုင်းပြည်ဖြစ်၏
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အက္ခရာရုရှားဖို့အလွန်ဆင်တူ Cyrillic, စာလုံးအီးအီးနဲ့ N ကြောင့်၌နေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်စာတစ်စောင်ခလည်းမရှိ, ဤအစိုင်အခဲနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်၏
ကမ္ဘာ့ဝိုင်၏ 80-85% ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေ export နေကြသည်;
ဒေသခံများအခွန်အဖြစ်% 40 အထိပေးဆောင်;
အကြိုက်ဆုံး pastries - banichka သို့မဟုတ် banitza (brynza ကနေဟင်းနုနွယ်ရွက်မှကွဲပြားခြားနားသောဖြည့်အတူစာရွက်မုန့်ဖုတ်) .Cottage ဒိန်ခဲထိုကဲ့သို့သောလက်ဆောင်မပေးဖြစ်သကဲ့သို့,
Kiselo mlyako - အမျိုးသားရေး kefir - ကဘက်တီးရီးယားအထူးကြင်နာများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူထုတ်လုပ်အတိုင်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမ Analogues ရှိပါတယ်။ ဂျပန်၌ကြီးမြတ်ဝယ်လိုအားနှင့် "အသက်ရှည်၏ elixir" ဖြစ်စဉ်းစားသည်,
ဘူလ်ဂေးရီးယားကလူအထူးသတိမရဖြစ်ကြပြီးနှောင်းပိုင်းတွင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤလူမျိုးကိုငြူစူခြင်းကဲ့သို့သောအနေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်အရည်အသွေးအနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ အိမ်နီးချင်းများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆွေးနွေးခြင်းကိုအလွန် ချစ်. ပါ၏
အပန်းဖြေစခန်းမြို့ဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများများအတွက် menu ကိုများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, စျေးနှုန်းကွာခြားချက်အဖွဲ့ဝင်များကိုမူကား,
ရုရှား၌ "Yes" ကို nods ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် "no" ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျများနှင့်အပြန်အလှန်။ သတိထားပါ!
ငါ၏ချမ်းသာအများစုဟာ Bansko ကိုခေါ်သေးငယ်တဲ့မြို့၌ရှိ၏။ ကြိုးနှံအရွယ်အစားအပြင်, ၎င်း၏အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းများ, လှပသောသဘာဝနှင့်အနည်းငယ်အဆင်မပြေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အသိအဘို့ကိုလည်းမှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားဧည့်အရေအတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်တန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိ; ယင်းပူဖောင်းလေနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာမာနထောင်လွှားလျက်, သူလျင်မြန်စွာတစ်ဦး, အသံကျယ်အဖျက်များနှင့်ရုတ်တရက်လမျး precedes တစ်ပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏ရှေ့တံခါးများအပေါ်ကွယ်လွန်သူဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ဓါတ်ပုံများကိုဆွဲထားဖို့ - ဒေသခံတွေ၏ထူးဆန်းတဲ့အလေ့အထနဲ့ပေါင်းစပ်ကွဲပြားခြားနားသောဥရောပနိုင်ငံတွေမှခရီးသွားဧည့်များ၏လူအစုအဝေး။ သို့သော် Bansko ကနေလူတွေကိုလည်းယေဘုယျထဲမှာ, photonecropolis ၏လေထုထပ်နေပါသည်ကြောင်း, တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွေရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတကယ်အမျိုးသားရေးအစားအစာနှင့်တသားတဒေသခံကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာအတွက်ကြီးမားတဲ့အသား Shanks အစာစားတဲ့လုပ်ရပ်ပြီးနောက်, ငါအကောင့်တစ်ခုယူဆောင်ခဲ့ကြီးမားတဲ့ဓါးတစ်အံ့မခန်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအထူးထိန်သိမ်းဖို့ကရိုက်ကိုဘယ်လိုကြိုက်တယ်။ ငွေကိုတွေနဲ့အတူတူလုပ်ဖို့ပေမယ့်မပေးခံခဲ့ရသည်။
ယခုကာစီနိုအကြောင်းကို။ Bansko အတွက်သူတို့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြသည်။ အလားအလာတောက်ပဆိုင်းဘုတ်များ slot က machines.Moreover ၏သာမန်မီးခိုး-ဖြည့်ခန်းမဝှက်ထားကြသည်များအတွက်သူတို့ကိုတူညီတဲ့ slot နှစ်ခုတည်းဟူသောရွေးချယ်မှုအလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာမည်။ ငါတဦးတည်းဟိုတယ် Vihren ၌ရှိ၏, နှင့်အခြားသောဂုဏ်ယူစွာ Blitz ဟုခေါ်သည်နှစ်ခုသောအရပ်တို့ကိုမအောက်မေ့ကြလော့။ စကားမစပ် Bansko အပေါင်းတို့၌လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှု၏သူကသာယာသောန်ထမ်းများနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ကစားတဲ့၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ခွဲခြားခဲ့ပါသည်အခြားသူများထံမှ, အများဆုံးလျောက်ပတ်ကြည့်ရှုကြ၏။ ဒေသခံမန်နေဂျာရုရှားကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဆိုဖီယာနှင့် Varna သာပုံမှန်လောင်းကစားရုံလည်းမရှိကပြောသည်။
ကောင်းပြီ, ငါသေး Varna ရောက်ရှိမလာကြပေမယ့်ဆိုဖီယာမှဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာငါ Plovdiv ၌ရှိ၏။ အရေးကြီးကိစ္စရပ်များ, အလုပ်နှင့်အခြားခွအေနမြေား။ သို့သော်လည်းငါသည်အခမဲ့တစ်ရက်ရှိခြင်းနှင့်အတူကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာဘူဂေးရီးယားမြို့တော်မှရရန်မည်သို့ဆုံးဖြတ်နျြရစျ။ ငါမသောက်ရမယ့်ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီးယူ contraindicated ခဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ခရီးစဉ်လည်းသံသယရှိအပျော်အပါးသလိုပဲ။ သို့သော် Tara အမည်ရှိယူကရိန်းဆိငါ၏အကယ်ဆယ်ရေးသို့ရောက်ကြ၏။ သူကဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်, 10 နှစ်ပေါင်းဘူလ်ဂေးရီးယားနေထိုင်ခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်။ Tara ပူ Saratov မှလာသော Volodya မှငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းပြည်မှာတော့ကောင်လေးကတစ်စက္ကန့်အိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူအချို့ရယ်စရာပိုက်ဆံအဘို့အကြှနျုပျကိုယူသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ လမျးခရီးတွင်, Volodya သူဆိုဖီယာတစ်ခုသို့မဟုတ်လောင်းကစားရုံမှဖူးတစ်ခါမျှဝန်ခံ, ထို့ကြောင့်ဒီခရီးစဉ်ငါ့ထံသို့အဖြစ်သူ့ကိုရန်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နည်းနည်းအချိန်ရှိ၏ဘူဂေးရီးယားမြို့တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကလုပ်ဖို့အချိန်ရှိသည်ချင်တယ်။ စီးပွားဖြစ်၏မျက်နှာကို ထောက်. , ငါကအခြားပို့စ်များကိုပိုမိုအသေးစိတ်ပြောပြမည့်အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုနံပါတ်, glimpsed နှင့်ညနေပိုင်းတွင်အတွက်လောင်းကစားရုံထံသို့သွားလေ၏။ Princess, Viva နှင့်လန်ဒန်: ငါသုံးခုသောနေရာများသို့သွားရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမင်းသမီးကာစီနို Rodina ဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်။ - သာ9စားပွဲကစားတဲ့, ဖဲချပ်များနှင့် Blackjack တစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်: ဒါဟာအတော်လေးတစ်လျောက်ပတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကစားနည်းဒေါ်လာ, ယူရိုနှင့်ဒေသခံ leva ထားနိုင်ပါတယ်။ chips စားပွဲ၌တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ အဆိုပါမင်းသမီးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်ထွက်အပြေးခဲ့ပါတယ်, ငါကပိုကြည့်ရှုလိုခဲ့သည်။
လာရောက်လည်ပတ်သူအညီဒုတိယ Viva လောင်းကစားရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အထဲတွင်, ရှိသမျှကုန်သည်တွေလှပသောအစိမ်းရောင်ဆင်မြန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမတ်မတ်၏အထူးသဖြင့်မှတ်သားဖွယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဂိမ်းကနေအနည်းငယ်စိတ်အာရုံထွေပြားပေမဲ့, ရာနက်ရှိုင်း decollete ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဗေဒပျော်မွေ့သည်။ ဒီလောင်းကစားရုံများတွင်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျလုံလောကျအမြားဆုံးလူတွေ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ Volodya ငါစျေးပေါ Blackjack စားပွဲ၌နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့မှစီမံခန့်ခွဲ - ကြွင်းသောအရာအလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါနဲ့ကလေးတွေရဲ့လောင်းကြေးကစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလာမယ့်ပထမဦးဆုံးမှာငါမီးရှို့ဘူဂေးရီးယား ludoman ဘို့သူ့ကို ယူ. , လူသည်ထိုင်တော်မူ၏။ ဂိမ်းသွားခဲ့ပါသည်အားလုံးသည်စဉ်, မိမိမိခင်ဘာသာစကားတချို့စိတ်ခံစားမှုမှတ်ချက်များကိုထုတ်ကြကုန်အံ့။ Volodya ကရှင်းပြသည်ပြီးနောက်သူ၏စကား၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုငါနားမလည်ခဲ့ဘူး - က ludoman မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦး neckline နှင့်အတူအစိမ်းရောင်ဝတ်စုံအတွက် croupier ရဲ့မိန်းကလေး၏ဖခင်။ အများအားဖြင့်သူကတက္ကသိုလ်ကိုပြန်သွားဖို့မိမိသမီးတောင်းပန်နှင့် သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့, အခါအားလျော်စွာပြည်တန်ဆာမကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
နာရီ၏လက်သန်းခေါင်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်, Volodya နဲ့ကျွန်မပြီးသားလာမည့်အဖွဲ့အစည်းပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံလန်ဒန်ကိုခေါ်ခဲ့သည်, ကပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်အများဆုံးသာယာသောတွေ့ကြုံထားခဲ့တယ်။ လန်ဒန်မြို့ရှိကလပ်ဖဲချပ်ရှိပါတယ်။ Tours မှအဆက်မပြတ်ကဒီမှာကျင်းပကြသည်, ထိုသူတို့သည်ဘုံခန်းမထဲမှာ plasma ထုတ်လွှင့်နေကြသည်။ မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွဲထားရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်များအပြင်, ကလည်း 13 စားပွဲရှိပြီးနှစ်ခုထက်ပိုသောကလပ်ဖဲချပ်ဝေဇုန်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဒီလောင်းကစားရုံရှိတစ်ဦး VIP ခန်းမလည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အားလုံးအဲဒီမှာဝန်ခံကြသည်မဟုတ်။ စကားမစပ်, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့န်ထမ်းကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်မရုရှား, ဒါပေမယ့်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောတောင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။ ဘာသာစကားများအသိပညာနားလည်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှု၏ခြုံငုံအဆင့်ကိုတိုးပွါးမသာ။
ဆိုဖီယာအတွက်, အဲဒီမှာသည်အခြားကာစီနိုလောင်းကစားရုံသော်လည်း, သူတို့ထဲကအများစုဟာပရိယာယ်တောက်ပဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူ slot ကစက်တွေ၏ခန်းမဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လောင်းကစားအဓိကဟင်းမဟုတျကွောငျးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, သူတို့ကပိုရိုးရာကြွင်းသောအရာများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုသွားပါ, ဘယ်သူမှဒေသခံလောင်းကစားရုံ၏မျက်နှာကို ထောက်. အထူးသကဒီမှာလာသောကြောင့်သင်တို့အဘို့ Vegas မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအရပ်၌သင်တန်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှားပါးမှုဖြစ်ကြ၏သော်လည်းငါ့ခြုံငုံစှဲအတော်လေးအပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ငါကြီးမားသောမဟုတ်ဆိုသော်ငြား pluses အတွက်သုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ပေမယ့်လမ်းများနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏ကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အဝကိုပိတ်ထားပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေနှငျ့သငျကစားချင်တယ်ဆိုရင် - သင်လုံခြုံစွာရုံအရောင်တောက်တောက်အရိပ်လက္ခဏာမမြင်ရပါဘူး, ဒေသခံတစ်ဦးလောင်းကစားရုံကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
0.3 ထိပ်တန်း 10 ဘူဂေးရီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.0.1 လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ဥပဒေများ - သမိုင်းကိုကိုးကား
3.0.3 ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်မြေ "အော့ဖ်လိုင်း" ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
3.1 ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားခြင်းကိုစတင်ဘယ်လိုနေသလဲ?